My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ချစ်သူများ (ဖေ့စ်ဘွတ်)
မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ချစ်သူများ (ဖေ့စ်ဘွတ်)
November 1 Htike Aung Tun ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက် ကုန်ကျစရိတ်၊ ကျွန်တော့်အတွက် တစ်လကုန်ကျစရိတ်၊ ထမင်းဖိုးဟင်းဖိုးမုန်းဖိုး တစ်ရက် ၃ဝဝဝ၊ တစ်လ ၉ဝဝဝဝ (တခြားကျောင်းသားများလည်း ထမင်းစရိတ် ဒီလောက်ကုန်ကျတာပဲ)၊ ဆိုင်ကယ်အပ်ခ ၂ဝဝဝ (မပြောပလောက်)၊ ကျောင်းလခ ၈ဝဝ (Game ဖိုး လေးနာရီစာ)။
Dr. Tint Swe ၁၉၆၅-၇၂ ဆေးကျောင်းသားတွေ တလမှာ အဆောင်ကြေး ၄၂ ကျပ်၊ ကျောင်းလခ (၁၅ x ၂) ၃ဝ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၇၂ ကျပ်။ (စတိုင်ပင်) ခေါ်တဲ့ ဆင်းရဲဆေးကျောင်းသားဟာ တလကို ၇၅ ကျပ်ရလို့ လဘက်ရည်ဘိုး ၃ ကျပ်ကျန်သေးတယ်။ မိဘတွေဆီက တလမှာ ၃ဝ-၅ဝ ကျပ်လောက် တောင်းရင် တလတွက်လောက်ခဲ့တယ်။
ဆရာသခင်ဇင်, Wai Phyo Kyaw, Thinn Thinn Tun and 10 others like this.
Sit Tin ဆရာပြောမှ သတိရမိတယ်။ ယခုခေါက်ဆွဲတစ်ခွက် စားတိုင်း ပေးရတဲ့ငွေ ၂၅၀ ကျပ်က ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ဆေးတျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ တစ်လစရိတ်ဖြစ်နေတယ်။
So Min Tunn တိုးတက်လာတာပေါ့ဗျာ။
Sayar Soe ၁၉၇၉ အဆောင်ကြေး ၁၂ဝ၊ ကျောင်းလခ တလ ၃ဝ၊ အဆောင်ကြေးက ထမင်းဖိုးပါ ပါတယ်။
Kyaw Ngwe ၁၉၇၄ခု နန်းရှေ့ဆောင်နေ ဆေးကျောင်းသားအတွက် အိမ်က တစ်လကို ၁၅ဝ ကျပ်နဲ့ကစပေးခဲ့တာပါ။
Khin Ma Ma Kyaw အဆောင်ကြေး ၁၂ဝ က ကျောင်းပိတ်ခါနီးရင် refund ပြန်ရသေးတယ်။
U Mya Win In 1970s IM (1), I got free tuition, for the bus fee, tea, chroot etc. about one kyat is ok. 150/m is enough.
May Kyaw Thu When I was at Mandalay University in 1993, my parents sent only 1000kyats to meamonth. That was enough.
Posted by Dr. Tint Swe at 6:55 AM